कविता संग्रह : आर पी कलाङ्गत रामेश्वर प्रसाद यादवका कविता संग्रह - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← अनूदित कविता : अनुवाद – एक सेतु
Micro-Story : Specialty →
~रामेश्वर प्रसाद यादव~
(मिति: २०६७ कार्तिक १०)
बगाऊ आँसुको धारा, यो कलिलो जीवनमा।
साहससँग काम लेऊ, यो स्वर्ग जीवनमा॥
लेखक: रामेश्वर प्रसाद यादव
आर पी कलाङ्गत
सिमराढी गढी, धनुषा
-आर पी कलाङ्गत
मनको पीडा मनैले बुझ्छ, अरूले बुझ्दैनन्,
कर्मको फल मनैले पाउँछ, अरूले पाउँदैनन्।
जता सुकै गए पनि आफु नै जान्छ, अरू जाँदैन,
जीवनभरिमा साथ दिने, दुइटै दु:खी सुखी हुन्छन्।
आफुले चाहेको कुरा, हुन सक्दैन,
नचाहेको व्यक्तिलाई, सबै थोक हुन्छन्।
पहिलो सुख गर्ने, त्यो हुन्छ सधैंको दु:ख,
जो पहिला दु:ख गर्ने, त्यो हुन्छ सधैंको सुख।
आफुले नचाहेको व्यक्ति, त्यो हुन्छ दुष्ट,
दु:खमा साथ दिने, त्यो हुन्छ मित घनिष्ट।
जसले अरूको कुरा सक्दैन सहन, त्यो हुन्छ घमण्ड,
त्यसको घमण्ड नष्ट गर्ने, एउटै हुन्छ कर्तव्य।
संसारमा मानिस, हुन्छ विभिन्न किसिमका,
सबैका जीवन पनि, हुन्छ थरि थरिका।
सोच्दैन मान्छेहरूले कहिले पनि, अरुको जीवन,
आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा बिताइदिन्छ सम्पूर्ण जीवन।
(मिति: २०४० भाद्र ११ शनिबार)
प्रस्तुतकर्ता:- रामेश्वर प्रसाद यादव
यो जुनीमा कति दु:ख कष्ट गरी,
यो सानु आत्मामा नै संतोष गरी।
अरूको बसमा झ्वास हुन्छ व्यक्ति,
गर्छन् कर्तव्य पालन आफ्नो त्यति।
आफुले मन पराएको भावना,
अरूले उखेलि दिन्छ नै कामना।
बस्छन् यो संसारको कुना काप्चामा
हुन्छन् अत्याचारीको कुभावनामा।
अंकित छ हामी सबैको भाग्यमा,
गर्छ साहस स्वार्थी नर कल्पनामा।
खोज्न चाहन्छ जस जसले निहुँ,
पुग्छन् दुष्ट व्यक्ति पर अरूको सामु।
भगवानको यो पवित्र मन्दिरमा,
कैयौं महान् कार्यको तपस्यामा।
नि:स्वार्थी मनुष्यको मोति बिन्दुमा,
चरित्र छर्लङ्ग देखिन्छ भाकामा।
जीवन ज्योति माधुर्य कर्तव्यमा,
सूर्य झैं अटल विश्वासपनमा।
(मिति : २०४५ असोज २० बिहीबार)
३. म पनि इच्छा गर्छु नामको
दिन्छन् जन्म बुबाआमा, स्वधर्म इच्छाफलको जुनीले।
आउँछ जिन्दगी बालकपनको, समयको कर्मले॥
कोही हुन्छ अन्धा अपाङ्ग, कोही हुन्छ र लाटो बहिरो।
कोही हुन्छ कानो गुंगो, कोही हुन्छ नै कालो गोरो॥
जीवन रहस्य अन्धा अपाङ्गको, स्वर तिखो कानले।
द्योतक हुन्छन् लाटो गुंगोको, इच्छा मन्द बुद्घिले॥
हुन्छ हृदयशक्ति कानो बहिरोको, सिपालु हातले।
कालो गोरोको पनि हुन्छ, पहिचान आफ्नो कर्तव्यले॥
साथी हुन्छन् संसारमा मानिसको, दुइटै दु:खी-सुखी।
हुन्छन् आत्मा साक्षी आ-आफ्नो, उनकै परमपौरखी॥
आत्मस्वावलम्बी हुनलाई नित्य, सत्यकर्म गर्दछन्।
अधर्मी मनोभावनाले नै, समाजको बाहिर हुन्छ॥
जनबल उनैले पाउँछ, जो परोपकारी हुनाले।
हुन्छ सक्रिय जन जागृति, माधुर्य आत्म सम्मानले॥
बाहिरी आडम्बरले परिपूर्ण, कोही ठूलो हुँदैन।
हुन्छ मानिस ठूलो दिलले, उच्चतम् जातले हुँदैन॥
साहसी मानिस हुन्छ नै वीर, एक एक रगतले।
मातृभूमिको भविष्य उज्जवल पार्ने हुन्छ नै तिनले॥
(मिति : २०४५ असोज २१ शुक्रबार)
मति बिगार्छ काल, जति धनवान् भएपनि।
खेर फाल्छ सीप, जति चतुर्‍याँई गरेपनि॥
सबै जगत प्राणीले, अझै बाँचु भनिकन।
कसैको केही लुक्दैन, कैयौं सीप गरीकन॥
जति जन्मिने प्राणी एक न एक दिन मर्छ।
कोही मर्छ विनाशले, कोही अकालमै मर्छ॥
अझै सम्म कालले, कसैलाई छोडेको छैन।
नवरत्नले छोप्दा पनि कोही जीउँदा छैन॥
थाहा पाउँदैन कोही, कालको आगमनले।
काम्छ मुटु जुनीमा, बितेका घटनाहरूले॥
आफु कति कालसम्म बाँच्ने टुंगो छैन केही।
मातृभूमिको सेवा गर्न सम्झेका हुन्छन् केही॥
कति ठूलो काल छ, हेर्न सकेको छैन कोही।
कहाँ कस्तो हुन्छ, त्यो कल्पना छैन केही॥
अमर बन्छ ती चोखो तातो रगत दिएर।
शहीद उही हुन्छ, युद्घकालसँग लडेर॥
(मिति: २०४५ असोज २२ शनिबार)
भुकम्प हुन्छ कि कसो स्मरण हुँदैन कसैको पनि,
कहिले त्यो हुन्छ होला अनुमान छैन यति पनि।
उन्नाइसौं शताब्दीको महाभूकम्प थियो अन्त्यतिरको,
तिनले रूप विनाशकारी लिई क्षति भयो जगतको।
एघार हजार जन मृत्यु भयो रे त्यो दैव्यरूपले,
पहिलो नाम रह्यो संसारमा भयङ्कर घटनाले।
फेरी अब हुन्छ की, त्यसको आशंका बढ्नथाल्यो रे,
वर्षौं वर्ष समय बित्दा अनि त्यो विचार हरायो रे।
देश देशमा फैलियो लहर विकासको तीव्रगति,
हरायो सबै अधिन एक एक स्वार्थी नरको शक्ति।
काल चक्र आउँछ कि विचार फैलियो एक चोटी नै,
हाहाकार भयो स्वदेशमा अकालको पैंतालिस सालमै।
थाल्यो घनघोर वर्षा हुन फेरियो सास संतोषको,
आयो भीषण बाढी बन्द भयो सुगम रेल सहितको।
आक्रोश फैलियो सबैतिर लोभ, अन्याय भ्रष्टाचारको,
पाप धर्म लुट्न आयो आगमन भयो कालको।
पचपन्न वर्ष पछि फेरियो पाँच पाँचको समय,
यस्ता अशुभ अंक मिलि धारण गर्‍यो विनाश समय।
ठूलो क्षति पुर्‍यायो यहाँ नै यो दोश्रो महाभूकम्पले,
भू हलचल मै मर्‍यो स्वदेशी एक हजार जतिले।
राजा प्रजा सहित चकित हुनुभयो यो घटनाले,
सहयोगीको भावना बढ्यो विश्वको इतिहासले।
(मिति: २०४५ असोज २३ आइतबार)
यो मृत्यलोकमा एक पटक मान्छे जन्मिन्छ,
आफ्नो जन्मभूमीको लागि केही सत्यार्थ लाग्छ।
आफु जन्मनासाथ हुर्की बढी लाग्छौं पढ्नमा,
साना बालक छँदा केही लेख्न लाग्छ मनमा।
पढ्न शुरू गर्दा कथा सिकाई दिन्छ गुरुले,
आफ्नो आत्मामा छाप पर्दा निष्कर्ष हुन्छ तिनले।
चिन्तन मनन हुन्छ दू:खी जन नेपालीको,
उज्ज्वल पार्न सकून् हुन्छ उपकार त्यसको।
दु:खी जहानको मुटु असहाय भए पनि,
स्वाबलम्बी हुनमा गर्छन् तनमनले उनी।
धनी हुन लाग्छ मन अहम् बढ्छ स्वभावमा,
भिखारीको दु:ख हेर्दा रून्छ मुटु ईश्वरमा।
दुई चार दिनको जिन्दगी चोले फेर्छ सत्य,
तीता मीठा अनुभव चाहिन्छ उच्च हृदय।
देशभक्ति हुन चाहिन्छ कर्म अनुशासन,
कर्म गर यश पाऊ कीर्तिमान् राख जीवन।
(मिति : २०४५ कार्तिक १८ शुक्रवार)
उत्पन्न हुन्छ कल्पना नरको चिर आत्मामा,
प्रकृतिको सृष्टि पूर्ण हुन्छ आँखामा।
डाँफे भाकाले घन्किन्छ मर्म स्पन्दनमा,
हिमालको काखमा छन् तराइका तरेलीमा।
खोलाको बाटोले तराइको मलिलो माटोले,
चौंरीको दूधले हरियाली फाँटको बालीले।
बिहानीको घामले टल्किने सुनौला चुचुरा,
पहाड पखेरामा गौंथलीको घरबारमा।
सुन्दर दृष्टि बारीमा जुनारको बगैंचामा,
चौतारीको ठाउँमा वर पिपलको छाँयामा।
गर्छन् मायालु सुविचार कोइलीको भाकामा,
आफ्नो दु:खी जीवन बिताउँछन् नै स्वदेशमा।
एक एक मुटुले दिन्छ बलिदान युद्घमा,
शहिदको पाइला चाली हुन्छ गद्‍गद् वीरतामा।
श्रीपेचको नव मुकुट भित्र फिजिन्छ मर्म।
जीन्दगी नै आउँछ अर्को अमर वाणी कर्म।
हामी सवै नेपाली एक गरौं सेवा देशको,
विश्वको सामुमा आउँछ सुनाम गोर्खालीको।
(मिति : २०४५ मंसीर ४ शनिबार)
जीन्दगीको लहरमा त्रिमूर्तीको भक्ति गर्छन्,
कर्तव्यपालन गर्न जीवन नै बिताउँछन्।
छोरा भक्ति गर्छ श्रवण झै बुबाआमा प्रति,
विद्यार्थीवर्ग पनि गर्छन् नै गुरुजन प्रति।
पूजारी पूजा गर्छ मन्दिरमा दैव्यशक्तिको,
योगी महात्मा तपस्या गर्छन् अलकरूपीको।
चन्द्रमा घुम्छन् निरन्तर वरिपरि पृथ्वीको,
चन्द्रमा घुम्छन् परिक्रमा सूर्यनारायणको।
प्रभातले फिजाउँछ कान्ति पृथ्वीवासीलाई,
सबै जगत्–प्राणी गर्छन् विनय ईश्वरलाई।
अटल विश्वास तपस्याले ध्रुवलोक पुगी,
घुम्छन् सप्तऋषी तारागण ध्रुवकै वरिपरि।
अनगिन्ति ताराले शोभा दिन्छ आकाशलाई।
चन्द्रबहुरूपीले उज्ज्वल पार्छनु रातलाई,
देशलाई शिर ठाडो गर्ने हुन्छ देशभक्ति,
थोपा थोपा जनबल मिलि गर्छन् आत्मशक्ति।
शहिदको लागि त्याग दिन्छ नेपाली मुटुले,
भक्ति गर्छ उनैले जन्मभूमीको सपूतले।
(मिति: २०४५ मंसीर ०४ शनिबार)
समस्त नेपालीहरूलाई दशैं, तिहार – छठको उपलक्ष्यमा
हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ।
स – सम्पूर्ण नेपाली बुद्घिजीवी वर्ग सुखमयहोस्
म – महान पर्वहरूलाई सबैले सम्मान गरौं
स्त – खुलस्त रूपमा हरेक कामको पारदर्शीहोस्
ने – नेपालका नेताहरूलाई सद्‍बुद्घि दियून्
पा – पाठशालामा बालबालिकाहरूलाई पठाऔं
ली – लिखितरूपमा सबै जनजातिको भावनालाई समेट्ने गरी संविधान बनोस्
ह – हक र अधिकार सम्झौं
रू – रूप अनुसारको देव र देवीलाई पूजा पाठ गरौं
ला – लाखौं नेपालीहरूको दीर्घायुको कामना गरौं
ई – ईनामका लागि राम्रा राम्रा काम गरौं
द – दया गर हे भगवती
शैं – शैलपुत्री माँ दुर्गा देवी
ति – तिमी सधैं मेरो रक्षा गर
हा – हाँसी खुशीले मेरो जीवन भर
र – रत्तिभर म विचलित नहोऊँ
छ – छटपटी र वेदनाले कहिल्यै नछोऊँ
ठ – ठग र चोरको संगत नलाऊँ
को – कोठा महल सबै म पाउँ
उ – उपकारी बनौं र अरूलाई बनाऔं
प – परोपकारी भन्ने भावना सबैमा जगाऔं
ल – लहै लहैमा कसैसँग नजाऔं
क्ष्य – क्षय हुने काम प्रति सजग होऔं
मा – मातृभूमीको इज्जतको कदर गरी ईमान्दार नेपाली बनौं
हा – हामी सबैलाई दुर्गा, लक्ष्मी र सूर्यदेवले कल्याण गरूँन्
र्दि – हृदयमा ईश्वरको बासहोस्
क – कर्म र सीपको ज्ञान देओस
मं – मंगल नै मंगल मेरो होस्
ग – गणपति र लक्ष्मी सधैं दाहिने होस्
ल – लगन, सीप र मेहनतले म बाँचू
म – मनलाई सधैं प्रफुल्ल बनाई म नाचूँ
य – यमराज पनि नजिक आउन डराओस्
शु – शुभ नै शुभको सधैं जयगान गाओस्
भ – भगवती देवी सधैं कृपा गर
का – कामना सधैं मेरो पूर्ण गर
म – मह नै महमा मेरो हात होस्
ना – नाम मेरो सधैं जयजयकार होस्
छ – छठीमाईले सबैवर्गका नेपालीहरूलाई कल्याण गरूँन्।
प्रस्तुतकर्ता : रामेश्वर प्रसाद यादव
समस्त नेपालीहरूलाई होलीको उपलक्ष्यमा हार्दिक
मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
हो – होलिकाको दहन (दुष्ट आत्माको दहन) गीत गाइ
ली – लीला (नाच) नृत्य गरी रंग अबीर खेलौं
को – कोइलीको भाकामा मीठा गीत गाऔं
व्य – व्यवहारमा असर नपर्ने गरी रंग अबीर खेलौं
क्त – भक्त प्रह्लाद जस्तो बानी बसालौं
ग – गरीब र अमीर बीचको मतभेदको भावना त्यागी भाइबन्धुत्व जस्तो बनौं
र्द – दर्द भरी गीत गाइ रंग खेलौं
(मिति : २०६७ कार्तिक १०)
This entry was posted in कविता सङ्ग्रह and tagged Kabita Sangraha, Rameshwar Prasad Yadav. Bookmark the permalink.